Izikolo ze-12 zeZikolo eziBalaseleyo kwiLizwe ngeeScholarships
Eli nqaku libonelela ngolwazi lwekhonkrithi kwezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli emhlabeni kunye nezifundo abazinika abafundi.
Ubunjineli yenye yeengcambu ezinzulu zesayensi, inegalelo kwaye isenegalelo elikhulu kwihlabathi akukho nxalenye yehlabathi ukuba ubunjineli abuchaphazelekanga, sesinye seziseko eziphambili elakhelwe phezu kwazo ilizwe.
Ukuphononongwa kobunjineli kuyenze yahluma amanye amasebe abaluleke kakhulu afana nobunjineli bemichiza, ubunjineli bezobunjineli, ubunjineli boomatshini, ubunjineli bekhompyuter, ubunjineli be-aerospace kunye nolunye uqeqesho oluninzi oluthe lwanegalelo ekubumbeni uluntu nehlabathi liphela.
Ezi nkalo zisaphononongwa ngakumbi kwaye ke zisaqhubeka negalelo kwihlabathi kwaye zifundwa kumaziko ahlukeneyo abantu abanomdla wokufumana ulwazi olwaneleyo ngalo naliphi na isebe lobunjineli kwaye bathathe inxaxheba ekwenzeni igalelo kuluntu.
Ngelixa ulapho, kuya kufuneka ujonge eli nqaku silenzileyo kwifayile ye- I-9 zeeyunivesithi eziphambili zobunjineli eCanada ukukhulisa kunye nokuphuhlisa izakhono zakho kuloo meko yobunjineli, abafundi bamanye amazwe banokufaka izicelo kwezi zikolo kodwa okokuqala kufuneka wazi malunga Imigaqo kunye neemfuno zaseCanada zabafundi ukuqala uhambo lwakho lokufunda eCanada
Ubunjineli yenye yezona zikhokelo ziphambili zikhokela umntu kwikamva yiyo loo nto phantse onke amaziko kwihlabathi ebonelela ngobunjineli kunye noqeqesho olunxulumene noko kodwa kukho ezinye izikolo ezigqitha ezinye kwicandelo lobunjineli.
Ezi zikolo zisebenze nzima ukufumana ukwamkelwa okukhoyo namhlanje, zikwenzile negalelo elikhulu ekuqhubeni ubunjineli phambili ngalo mthetho kwaye ezinye ezininzi zenze ukuba ezi zikolo zifumane ukwamkelwa kwihlabathi liphela kwaye zaziwa njengezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli. umhlaba.
Jonga uluhlu esilwenzileyo kwifayile ye- Iikholeji ezi-8 eziphambili zobunjineli obuphakathi babafundi, abanokhuphiswano oluncinci kwaye baqinisekile ukuba bakubonelela ngokulinganayo ngemfundo esemgangathweni kwisayensi yobunjineli.
Ezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli zilincede kakhulu ilizwe kwaye ayiphelelanga apho, ezi zikolo zikwanceda abafundi bakhe, basekhaya nakwamanye amazwe, ngokunikezela ngamabhaso okufunda ukunceda ikhondo labo lobunjineli.
Apha ngezantsi luluhlu lweyona yunivesithi ibalaseleyo yobunjineli emhlabeni kunye nolwazi lwabo lokufunda.
1 Ubunjineli Njengoqeqesho
2 Izikolo ze-12 zeZikolo eziBalaseleyo kwiLizwe ngeeScholarships
2.1 # 1 IMassachusetts iZiko leTekhnoloji (i-MIT)
2.2 #2 IYunivesithi yaseStanford
2.3 # 3 iYunivesithi yaseCambridge
2.4 # 4 ETH Zurich - iZiko leTekhnoloji laseSwitzerland
2.5 # 5 iYunivesithi yaseCalifornia, Berkeley (UCB)
2.6 # IYunivesithi ye-6 yeOxford
2.7 # I-7 Imperi yeKholeji eLondon
2.8 # 8 iYunivesithi yeNanyang Technological (NTU)
2.9 # 9 iYunivesithi yaseTsinghua
2.10 # IYunivesithi yeSizwe ye-10 yase-Singapore (NUS)
2.11 # 11 I-Georgia Institute of Technology
2.12 # 12 EPFL Lausanne-iZiko laseSwitzerland leTekhnoloji
2.12.1 I ngcebiso
IZiko leTekhnoloji yeNanyang
IYunivesithi yesizwe yaseSingapore
# 1 Iziko leTekhnoloji laseMassachusetts (MIT)
I-MIT ibekwe njengesona sikolo sobunjineli sesona sihamba phambili kwihlabathi, ngegalelo laso ekuboneleleni ngemfundo esemgangathweni, esemgangathweni kwisayensi nakwitekhnoloji kubandakanya negalelo elikhulu lehlabathi. I-MIT iqhutywa ngenjongo yokwenza ukuba umhlaba ubengcono ngokwenza izinto ezintsha, uphando kunye nemfundo.
MIT ibonelela ngesiseko-esisekwe ukufundiswa kwabafundi besikolo esiphantsi abaxhaswe ngabafundi beMIT kunye nabahlobo, kunye neMIT ngokubanzi. I-59% yezifundo zakudala zeMIT zifumana izifundiswa qho ngonyaka ukubanceda kwimfundo yabo.
# 2 iYunivesithi yaseStanford
Eyilwe kwi-1885 kwaye sele isekwe njengendawo yokufunda, ukuvelisa izinto ezintsha, ukufumanisa, intetho kunye nentetho, iStanford ibekwa kwisikolo sesibini sobunjineli kwihlabathi elinika abafundi izakhono ezaneleyo kunye nolwazi lokwenza iinjineli ezizeleyo.
Ngenjongo yokuxhasa abafundi kwaye ibenze bathathe inxaxheba kule mfundo ekumgangatho wehlabathi, iYunivesithi yaseStanford ibonelela ngoncedo lonyaka lokufunda olufumanekayo kuwo omabini amazwe nakwabafundi abafundela izidanga.
The i-graduate scholarship isekwe kwimfuno ngelixa i abafundi abaphumelele isekwe kwimali ekhoyo kunye nokusebenza ngokuqaqambileyo komfundi. Malunga ne-80% yabafundi bafumana izifundiswa qho ngonyaka.
# 3 iYunivesithi yaseCambridge
Esi sesinye isikolo esithandwayo esaziwa kwihlabathi liphela endiqinisekileyo ukuba uyamangaliswa sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli emhlabeni. IYunivesithi yaseCambridge yasekwa kwi1209, iyenza ukuba ibe yenye yezona yunivesithi zidala emhlabeni, kwaye ukusukela oko bezalisa abafundi ngolwaneliseko olugqwesileyo kwezemfundo ngemfundo, uphando kunye nokufunda kumanqanaba aphezulu aphesheya.
IYunivesithi yaseCambridge ibonelela amabhaso okufunda kumfundi onesidanga sokuqala esekwe kwiimfuno ukuze bakwazi ukufumana imfundo ebafaneleyo kwaye babe ngabaphumeleleyo ngokupheleleyo kuluntu. Inkxaso mali yokufunda yeyabafundi basekhaya nakwamanye amazwe kwinqanaba lesidanga sokuqala.
# 4 ETH Zurich -Ziko laseSwitzerland laseTekhnoloji
Eyasungulwa ngo-1854 kwaye ihlala eZurich, eSwitzerland, i-ETH Zurich iyunivesithi yophando yoluntu eyazinikezelwa ekufundiseni iinjineli kunye nososayensi kwaye iphumelele kakuhle kuloo nto ukuba ibhalwe apha njengenye yezona zikolo ezilungileyo zobunjineli kwihlabathi. Ukwamkelwa kwayo kwezi nqanaba kuyaziwa kwihlabathi liphela, ngenxa yegalelo layo kwihlabathi ukusukela oko yasekwayo.
Igalelo elenziwe yi-ETH Zurich lenze ifuthe elihle kwihlabathi kwaye lide lichaphazele nabantu abanqwenela ukufunda apho ngenkqubo yokufunda enesisa. Inkxaso mali yokufunda isekwe kwimfuno kwaye ziyafumaneka kubo bobabini abafundi bamanye amazwe nabasekhaya ukuba bafake izicelo. Abafundi abanqwenela ukulandela Isidanga semasters sikwanikezelwa ngezifundo ngokusekwe ekusebenzeni kwabo ezifundweni.
# 5 iYunivesithi yaseCalifornia, eBerkeley (UCB)
Njengeyunivesithi yophando kawonkewonke enenjongo yokuqhubela phambili sonke isizukulwana ukuya kokuhle kakhulu, i-UCB inesidima kwindawo yobunjineli nakwihlabathi liphela ngenxa yegalelo lalo elikhulu kwinzululwazi kwaye oku phakathi kwezizathu ezininzi kutheni idume njengenye yazo ezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli emhlabeni.
I-UCB iqhubela abafundi ekugqweseni kwaye ibaxhobise ngezakhono ezaneleyo ezifunekayo ukuze babe ngabafundi abaziwayo bobunjineli nokuba yeyiphi na intsimi oyithathayo.
Ukwenza wonke umfundi onomdla abe yinxalenye yemfundo ekumgangatho wehlabathi, i-UCB ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo iiprogramship ukunceda kwiindleko zokufunda zabafundi. Inkxaso mali yokufunda iyafumaneka kubo bobabini abafundi bamazwe aphesheya kunye nabasekhaya kwisicelo.
# 6 iYunivesithi yaseOxford
I-Oxford yenye yeyunivesithi ekhokelayo kwihlabathi kwaye ngenxa yokugqwesa kwayo kwicandelo lobunjineli, ibekwa njengenye yezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli emhlabeni. I-Oxford kulapho unokuzilolongela khona kwaye uphuhlise amandla akho obunjineli, uyijolise kwaye uyixhase ngeempawu ezifanelekileyo ukuze uphumelele kwindawo yobunjineli.
Njengendlela yokubonisa inkxaso eyongezelelweyo kubafundi bakhe, iYunivesithi yaseOxford ibonelela ngothotho iiprogramship iyafumaneka kwisicelo sabafundi bamazwe aphesheya kunye nabasekhaya abaqhuba kakuhle kwizifundo. Inkxaso mali yokufunda inokuba yinxalenye okanye ixhaswe ngokupheleleyo kodwa isanceda ekuxhaseni imfundo yakho ngokwezezimali.
# 7 Imperial College yaseLondon
Eyasungulwa ngo-1845 kunye nomsebenzi wokuncedisa uluntu ngokubonelela ngemfundo esemgangathweni kunye negalelo lehlabathi kwisayensi, ubunjineli kunye neyeza le mishini ayizange iguqulwe ukususela ekumisweni kweKholeji yase-Imperial yaseLondon kwaye yenza ukuba ibe yenye yezona yunivesithi ezilungileyo kakhulu emhlabeni.
Iminikelo yakhe kwihlabathi ayiphelelanga apho, iyaqhubeka nokunikezela ngamabhaso okufunda kunye nolunye uncedo lwezezimali ukunceda abafundi ukuba baxhase imfundo yabo kwaye babe yinxalenye yemfundo egqwesileyo yeKholeji yaseImperial. Izifundo ziyafumaneka igraduate kwaye igraduate abafundi abavela kuzo zonke iimbombo zomhlaba ukufaka isicelo.
# 8 iYunivesithi yeNanyang Technological (NTU)
I-NTU yiyunivesithi enzulu yophando eyasekwa kwi1981, ebekwe eSingapore kwaye yaziwa njengeyona yunivesithi yesibini ngobukhulu eSingapore. Igalelo le-NTU kwindawo yobunjineli kunye nokubonelela ngemfundo esemagqabini layinika indawo eyaneleyo kwizikolo zezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli emhlabeni.
UNanyang ubonelela ngebhaso lokufunda ngobubele igraduate (abafundi abatsha kunye nabafundi abakhoyo ngoku) kwaye abafundi abaphumelele kuwo nawuphi na umhlaba obonakalise ukugqwesa kwizifundo, ukunceda abafundi baxhase imfundo yabo ukuze nabo babe ziinjineli ezidumileyo kwaye banikele ngegalelo kuluntu nakwihlabathi liphela.
# 9 IYunivesithi yaseTsinghua
Eyasungulwa ngo-1911 kwaye i-Beijing, eChina, i-Tsinghua iyona yunivesithi enkulu yophando esele yenza igalelo kwilizwe lezesayensi. Imfundo yobunjineli apha iphezulu-inotshi enezixhobo zikarhulumente zokuzisa iklasi ithiyori yokuziqhelanisa kunye nokufumana izakhono kunye namava koonjingalwazi abaziwayo bobunjineli.
IYunivesithi yaseTsinghua ifumene uthotho lwezinto eziphambili ezaziwayo kwihlabathi kwiminyaka eyibeka phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli emhlabeni. Ukonwabela abafundi kwimfundo yakhe esemagqabini, iTinghua ibonelela izibonelelo ezixhaswe ngokupheleleyo ngemali kubafundi bamanye amazwe nabasekhaya nakweliphi na inqanaba lokufunda.
# 10 iYunivesithi yeSizwe yaseSingapore (NUS)
Esi sesona sikolo sidala eSingapore, esasekwa e1905 kwaye ukusukela oko ehambisa ukugqwesa kwizifundo, ngakumbi kuqeqesho kwezesayensi kunye nezobunjineli. Ngomsebenzi wokufundisa, ukukhuthaza kunye nokuguqula, i-NUS ayitshintshanga nakanye ekuguqulweni kwezinto ezinokubakho zabafundi kwimisebenzi enempumelelo.
Ehleli njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli emhlabeni, i-NUS inovelwano ngabafundi abangakwaziyo ukuhlawula iindleko zesikolo kwaye iphendulile kuloo nto ngokubonelela ngothotho lwezifundo zokuba nesisa ukunceda abafundi ukuba bafumane imfundo yobunjineli esemgangathweni ebafaneleyo kwi-NUS.
The iiprogramship Zisebenza kubafundi abatsha kunye nabaphumelele kwizidanga ze-NUS kulo naliphi na ilizwe elinomsebenzi obalaseleyo wokufunda.
# 11 IZiko leTekhnoloji laseGeorgia
Eyaziwa njengeGeorgia Tech, yasekwa ngo-1885 kwaye ukusukela oko inikezela ngeentlobo ngeentlobo zeedigri zeteknoloji ke oko kube negalelo kwindawo yenzululwazi nakwilizwe liphela lobunjineli. Ehlabathini jikelele yamkelwa njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezobunjineli emhlabeni, iGeorgia Tech yindawo yakho yokuphucula ubunjineli bakho ukuze waneliseke.
Amashumi e amathuba okubhalisana zinikezelwa minyaka le yiGeorgia Tech kubafundi bamanye amazwe nabasekhaya ngokusekwe kwizifundo ezigqwesileyo okanye iimfuno zezemali ukuze wonke umntu abe yinxalenye yemfundo egqwesileyo ngaphandle kokukhathazeka ngemali.
# 12 EPFL Lausanne-iZiko laseSwitzerland leTekhnoloji
Ifumaneka eLausanne, Swizalend kwaye yasekwa kwi-1853, i-EPFL liziko elinomdla lophando eligxile kwisayensi yendalo kunye nobunjineli. Ukufezekisa iinjongo zakho zobunjineli ngokuzeleyo kweli ziko elithe ngokugqwesa kwizifundo kunye negalelo eliphambili lobunjineli lenze ukuba libe sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli emhlabeni.
I-EPFL ibonelela ngemfundo esemgangathweni ophezulu kwaye ayinguye wonke umntu onokuthwala iindleko zemali, ukubonisa isisombululo kulo mbandela I-EPFL ibonelela ngesisa iibhaso zokubhalela kubafundi bakhe abanomdla abavela eSwitzerland nangaphaya ukuze wonke umntu afumane imfundo efikelelekayo kodwa egqwesileyo.
Oku kuzisa isiphelo sezona zikolo zi-12 zibalaseleyo kwezobunjineli emhlabeni kunye neenkcukacha zazo zokufunda. Olu lwazi lubonelelwe ngokufanelekileyo, okuseleyo kukuwe, uthathe isigqibo malunga nesikolo osikhethileyo kwaye uhlala ukhumbula ukunxibelelana ngokubhekisele kwisikolo osithandayo.
ICanada inezikolo zobunjineli ezigqwesileyo onokuthi uzifundele simahla, jonga uluhlu lwee I-5 yezona zikolo zibalaseleyo zobunjineli eCanada ngezifundo, isenza kube lula kuwe ukuba ufunde ungazikhathazi ngemali.
Ukuthetha nomphathi wokwamkelwa kuya kuba linyathelo elilandelayo lokufumana ulwazi ngakumbi nangakumbi kuba zonke iinkcukacha ngokubanzi zikweli nqaku.
Ezona zikolo ziBalaseleyo kubuGcisa kwiLizwe
Ezona zikolo ziBunjineli zeKhompyuter kwiLizwe liphela
Eyona misebenzi mihle yokuHlala kwaMama baseKhaya ngaphandle kwamava
Iiyunivesithi eziGqwesileyo kuLwazi lwesiNgesi kunye nokuBhala ngokuBumba
Ezona zikolo ziBalaseleyo kwezobuNjineli kwiLizwe
Iikhosi zeMasters eziSimahla kwi-Intanethi ezinesiQinisekiso
Ezona zikolo ziBunjineli ziBalaseleyo kwiHlabathi liphela
Post Previous:I-10 yeeKholeji zoLuntu eziBalaseleyo eCanada zaBafundi beZizwe ngezizwe
Okulandelayo Post:Ezona ziSombululo ziBalaseleyo zaMatyala eMali
Pingback: Izikolo ezi-5 eziphambili zaseLondon